यौन सम्पर्क शुरु हुनु अघि के चाहन्छन् महिला ? « Media for all across the globe
२०७८ बैशाख १० गते शुक्रवार
दुःखको आँधी–बेहरीमा नि हाँसी जिउन सिकायौ आमा !
आसाममा आएको बाढीमा कम्तीमा ८ गैँडासहित सय जंगली जनावर मरे
कांग्रेस महामन्त्री कोइराला अस्पताल भर्ना
प्रिय सरकार, कोरोनाको उपदेश तीतो हुन लाग्यो !
जीवन भनेको खाक समान छ त्यसैले यसमा घमण्ड नगर !
स्वस्थ जीवन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो !
नेपाल निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लियो
नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुग्योः यस्तो छ कारण
तिमी उभिने ठाउँ त तिमी बस्ने ठाउँमै निर्भर हुन्छ !